Telegram မက်ဆေ့ချ်များကို မည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်သနည်း - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 13/06/2022 20:17 | applications များ
မင်းအတွက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ သေချာပါတယ်။ သင့်ဖုန်းအား သင်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ၊ သင့်တွင် အရန်ကူးယူထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် သင်၏ Telegram chats များ၏ စကားဝိုင်းများသာမက ဖိုင်များအားလုံးလည်း ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မျှဝေခဲ့သည်။ အကြိမ်များစွာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို အရေးအကြီးဆုံးဟု မပေးသော်လည်း ဤစကားဝိုင်းများတွင် အလုပ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်လာသောအခါတွင် အရာများသည် ရှုပ်ထွေးသွားပါသည်။
စိတ်မပူပါနှင့်၊ ဤပြဿနာကို ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ခြေလှမ်းများနှင့် ဆက်တိုက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ Telegram အကောင့်မှ မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူနိုင်စေရန် လိုက်နာရမည့်အချက်များအရေးကြီးသော အချက်အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် အပလီကေးရှင်းမှ ချတ်များကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖျက်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခု ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရယူလိုပါက၊ သင်သည်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Telegram သည် သင့်အား ခြေရာခံမထားခဲ့ဘဲ မက်ဆေ့ချ်များ သို့မဟုတ် ချတ်မှတ်တမ်းများကို အပြီးတိုင်ဖျက်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေကို ပေးသည်. ဖျက်ပစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော ဤစာတိုများပင်လျှင် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နေထိုင်နည်းကို ရှင်းပြပါမယ်။
1 Telegram အပလီကေးရှင်းဆိုတာဘာလဲ။
2 Telegram မက်ဆေ့ချ်များ ပြန်လည်ရယူနည်း
2.1 undo ခလုတ်
2.2 မက်ဆေ့ချ်များကို Telegram တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
2.3 သင့်စက်၏ cache ကိုစစ်ဆေးပါ။
3 Telegram ကို ဘယ်လို Backup လုပ်မလဲ။
ကြေးနန်းစာ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက် လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ် Android နှင့် IOS ကို မမေ့ဘဲ Windows၊ MacO နှင့် Linux ကဲ့သို့သော။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသည့် စက်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက် ၎င်းကိုလက်တွေ့ရရှိနိုင်သည်။ ယင်းအပလီကေးရှင်းကို WhatsApp နှင့် နှိုင်းယှဥ်ထားသူများ ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် တူညီသော ရည်ရွယ်ချက် ရှိပြီး လက်တွေ့တွင် တူညီသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခြားနားသည်မှာ Telegram သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခု မလိုအပ်ပါ။ ဤအရာကြောင့်၊ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားလုံး၏ privacy ကိုအတော်လေးထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒါ့ပြင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စကားဝိုင်းများတွင် မျှဝေထားသည့် အချက်အလက်များကို Telegram ဆာဗာများတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဟုတ်ပါ။
Telegram မက်ဆေ့ချ်များ ပြန်လည်ရယူနည်း
သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့သည့် ဤကဏ္ဍတွင်၊ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖျက်လိုက် သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားသော Telegram စကားဝိုင်းများနှင့် ဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူပါ။
Telegram အက်ပ်၊ သင်ဖျက်လိုက်သည်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲ ပြန်ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. စကားဝိုင်းတစ်ခုမှ မက်ဆေ့ချ်များကို ဖျက်လိုက်သည့်အခါ အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သော အချိန်အတွင်း ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု မှတ်သားထားပါ။
ချတ်ကို လုံးဝဖျက်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါ၊ သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်ဖျက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရွေးချယ်မှု။ အဆိုပါ undo ခလုတ်ကို နှိပ်ပါက ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အရာအားလုံးကို ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အပလီကေးရှင်းသည် သင့်အား စခရင်၏အောက်ခြေရှိ ဖြစ်နိုင်ချေများကို ပြသသည့်အချိန်အတွင်းတွင်သာ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သင့်တွင် ခန့်မှန်းခြေ အချိန်5စက္ကန့် ရှိသည်။
သင်တစ်ဦးချင်းစီချတ်အတွင်း မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်သောအခါတွင် သင့်တွင် ဖြေရှင်းချက်အနည်းငယ်သာ ရှိလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်သည် အပလီကေးရှင်းမှ တစ်ခုခုကို ဖယ်ရှားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါ၊ ဤအရာ ထိုသို့သော အကြောင်းအရာကို အမှန်တကယ် ဖျက်လိုလျှင် သင့်အား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တောင်းဆိုပါမည်။သို့ဆိုလျှင် သင်သည် ၎င်းကို ဖယ်ရှားရန် စောင့်ဆိုင်းရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
မက်ဆေ့ချ်များကို Telegram တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ သင်သတိမထားမိဘဲ မက်ဆေ့ချ်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤစာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်၊ ၎င်းတွင် သင်သိမ်းဆည်းထားသော မက်ဆေ့ချ်များကို သိမ်းဆည်းထားပြီး အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်သည့် ဖိုင်တွဲတစ်ခုပါရှိသည်။
Telegram အသုံးပြုသူ အများအပြားသည် ဤလျှို့ဝှက်ဖိုဒါအကြောင်း မသိကြပြီး ၎င်းတို့၏ မက်ဆေ့ချ်များ ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး၊ အဲဒီစာတွေ မပျောက်သေးပေမယ့် သိမ်းဆည်းထားပြီး ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့ကို သင် မည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်ကို ယခု ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါသည်။
၎င်းတို့ကို ဝင်ရောက်နိုင်ရန် သင်သည် စာတိုပေးပို့ခြင်း အက်ပ်ကို ဖွင့်ရပါမည်။ ထို့နောက်၊ သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ဝင်းဒိုးထဲသို့ဝင်မည့်စခရင်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်သို့သွားပါ။ ထို့နောက် သင့်အမည်နှင့် နံပါတ်ကို ရွေးချယ်ပါ၊ အက်ပ်တွင် သင့်အသုံးပြုသူအမည်ကို ကြည့်ပါ။ ၌ ချတ်စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့် မှန်ဘီလူးအိုင်ကွန်၊ အသုံးပြုသူအမည်ကို ရေးပြီး အလိုအလျောက် Telegram၊ သိမ်းဆည်းထားသော မက်ဆေ့ချ်ဖိုင်တွဲကို သင့်အား ပြသပေးသည်။
သင့်စက်၏ cache ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်သည် ဖိုင်တစ်ခု ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်လိုက်မိပါက၊ မာလ်တီမီဒီယာ သို့မဟုတ် စာသားဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းကို ပြန်လည်ရယူလိုသည့် ဖြစ်ရပ်တွင်၊ သင်သည် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာရပါမည်။ ပထမဦးစွာ၊ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ဖိုင်မန်နေဂျာထံသွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Android ဖြစ်ပါက သင့်စက်၏အမည်အောက်တွင် ဖိုင်တွဲကို ရှာပါ။Folder မှာ နာမည်တူပါလိမ့်မယ်။
တွေ့ရှိပြီးသည်နှင့် ၎င်းကိုရွေးချယ်ပါ၊ ၎င်းနှင့် ၎င်း၏အကြောင်းအရာတို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။. အတွင်းတွင်၊ သင့်စက်များတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အပလီကေးရှင်းများ၏ cache အားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားသည့် မတူညီသောဖိုင်တွဲများကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ Telegram ၏အမည်အောက်တွင် ဖိုင်တွဲကိုရှာဖွေပြီး အပလီကေးရှင်းတွင်မျှဝေထားသောဖိုင်များအားလုံးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး မှားယွင်းစွာဖျက်လိုက်သောဖိုင်ကိုရှာဖွေပါ။
Telegram ကို ဘယ်လို Backup လုပ်မလဲ။
ဤသိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် WhatsApp တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်လေ့ရှိသည့်အရာများနှင့် အနည်းငယ်ကွာခြားပါသည်။ Telegram အက်ပလီကေးရှင်းတွင်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောဆိုမှုများ၏ဒေတာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်စေမည့်ကိရိယာ။
Telegram တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားသောချတ်များကို PC သို့တင်ပို့နိုင်စေရန်၊ သင်သိထားသင့်သည့်အချက်မှာ သင့်တွင်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်း၏ ဒက်စ်တော့တွင် အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းပါ။. ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် သင့်တွင်သာရှိသည်။ သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပြီး ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်စက်များထဲမှ တစ်ခုသို့ ပေးပို့ထားပြီး၊ များသောအားဖြင့် မိုဘိုင်း။
သင့်ကွန်ပြူတာတွင် အက်ပ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ စခရင်၏ ဘယ်ဘက်အပေါ်ပိုင်းရှိ ပေါ်လာသော မီနူးကို နှိပ်လိုက်ပါမည်။ဟမ်ဘာဂါမီနူးဟု လူသိများသည်။ နှိပ်လိုက်သည်နှင့် မီနူးတစ်ခု ပေါ်လာပြီး ဆက်တင်များ ရွေးချယ်မှုကို သင်ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။
ဆက်တင်များကို နှိပ်သောအခါ၊ ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးတစ်ခု ပေါ်လာသည်။ အဲဒီရွေးချယ်မှုတွေအားလုံးထဲမှာ၊ အဆင့်မြင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။. တစ်ဖန်၊ "ဒေတာနှင့် သိုလှောင်မှု" ကဏ္ဍအတွင်း "Telegram မှ ဒေတာထုတ်ယူရန်" ရွေးချယ်မှုကို သင်ရွေးချယ်ရမည့် မျက်နှာပြင်အသစ်တစ်ခု ပွင့်လာပါမည်။
Backup လုပ်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဖြစ်တတ်သလို၊ သင့်အားတင်ပြထားသည့် ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကို သင်သတိထားရပါမည်။သင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကို ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ အပေါ်မူတည်၍ ဤမိတ္တူသည် အနည်းနှင့်အများ ပြီးပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်။
ပုံတွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ သီးသန့် သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာချတ်များ၊ သီးသန့် သို့မဟုတ် အများသူငှာအဖွဲ့များ၊ ဖိုင်အရွယ်အစား၊ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသောသိမ်းဆည်းနိုင်ခြေများရှိပါသည်။ သင့်တွင် အရာအားလုံးနှင့် မိတ္တူကူးပြီးပါက၊ ဖိုင်အားလုံးကို ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်တွဲတွင် သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်သည်။ “Telegram Desktop” အမည်အောက်တွင်။
အရန်သိမ်းဆည်းခြင်း မရှိပါက၊ စကားဝိုင်းများ သို့မဟုတ် ဖျက်လိုက်သော စာတိုများ သို့မဟုတ် မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကို သင် ပြန်လည်ရယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ Telegram မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူနည်းအတွက် ဤအခြေခံအကြံပြုချက်များသည် သင့်အား ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ မည်သည့်အခါသမယတွင်မဆို သင့်တွင် ကုသမှုခံယူရပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » applications များ » Telegram မက်ဆေ့ချ်များကို မည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်နည်း။
Discord အတွက် အကောင်းဆုံး တေးဂီတ Bots